Umbhobho, ufakelo kunye nesiseko sesi sixhobo ku-Ubuntu 20.04 | Ubunlog
Umbhobho, ufakelo kunye nesiseko sesi sixhobo ku-Ubuntu 20.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga singazifaka njani kwaye sizilawule njani iiphakheji zePython sisebenzisa iPip kwi-Ubuntu 20.04. Esi sisixhobo sokufaka iiphakheji zePython. Ngayo siya kuba nakho ukukhangela, ukukhuphela kunye nokufaka iiphakeji kwiPython Index Package Index (I-PyPI) kunye nezinye izikhombisi zepakethe.
Kule migca ilandelayo siza kubona indlela yokufaka umbhobho wePython 3 kunye nePython 2 ku-Ubuntu 20.04. Siza kujonga ezinye zezinto ezisisiseko zokufaka kunye nokulawula iiphakheji zePython usebenzisa umbhobho. Kufuneka kuthiwe Njengobuntu buka-Ubuntu 20.04, i-Python 3 ibandakanyiwe kwinkqubo yesiseko, kwaye IPython 2 iyafumaneka ukuze ifakwe kwindawo yokugcina izinto ezikhoyo. Nangona ukusetyenziswa kwayo kungasacetyiswa kwaye abasebenzisi bayamenywa ukuba batshintshele kwiPython 3.
Xa ufaka iPython, Kuyacetyiswa ngamandla ukuba kufakelwe iphakheji yemodyuli yesixhobo kunye nesixhobo esifanelekileyonjengoko oku kuvavanyiwe ukusebenza ngokufanelekileyo kwiinkqubo Ubuntu. Kufuneka icace gca ukuba Iiphakheji zePython 3 zisebenzisa isimaphambili intuthu3- y Iipakethe zePython 2 ziyitshintshele kwi intuthu2-.
Ukuba ukhetha ukusebenzisa iPip kuphela kwimeko ebonakalayo. IPython Imeko eziBonakalayo Iya kukuvumela ukuba ufake iimodyuli zePython kwindawo eyodwa kwiprojekthi ethile, endaweni yokuba ifakwe kwilizwe jikelele. Ngale ndlela, asizukuba naxhala lokuchaphazela ezinye iiprojekthi.
1 Ukufaka iPip yePython 3
2 Ukufaka iPip yePython 2
3 Ezinye iziseko zokusebenzisa iPip
3.1 Faka iipakeji ngePip
3.2 Hlaziya iphakheji
3.3 Faka iiphakheji usebenzisa iimfuno zefayile
3.4 Uluhlu olufakelwe iipakeji
3.5 Khipha iiphakheji
Ukufaka iPip yePython 3
Ukuba sifuna faka umbhobho wePython 3 kwi-Ubuntu 20.04Kuya kufuneka sifeze le miyalelo ilandelayo kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T):
Lo myalelo ungasentla uya kufaka konke ukuxhomekeka okuyimfuneko ekwakheni iimodyuli zePython.
Xa ufakelo lugqityiwe, sinako qinisekisa ufakelo kwaye ujonge uhlobo olufakelweyo usebenzisa umyalelo:
Inombolo yenguqulo inokuhluka, kodwa iya kujongeka ngakumbi okanye incinci njengoko ubona kwiscreen esingentla.
Ukufaka iPip yePython 2
Umbhobho wePython 2 awufakwanga kwindawo yokugcina izinto Ubuntu 20.04. Ukufakela umbhobho wePython 2 siza kusebenzisa iskripthi get-pip.py.
Ukuqala, kwaye ukuba awunayo loo nto, kuya kufuneka uyenze vumela indawo yokugcina izinto:
Ngoku siza kuya Hlaziya isalathiso seephakeji ezikhoyo kwaye ufake iPython 2:
Ngoku, sisebenzisa isixhobo esikhawulezayo, siza kuthi khuphela iskripthi fumana.ip:
Nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe, siya kuthi sebenzisa iskripthi nge-python2 ukufaka ipayipi:
Umbhobho uya kufakelwa kwihlabathi liphela. Ukuba unomdla wokufaka kuphela umsebenzisi wakho, sebenzisa umyalelo ngaphandle kweSudo. Iskripthi siza kufaka izixhobo zokusetha kunye nevili.
Ngoku sinako qinisekisa ufakelo ngokushicilela inombolo yenguqulo usebenzisa umyalelo:
Ezinye iziseko zokusebenzisa iPip
Ngoku makhe sijonge eminye imiyalelo esisiseko yombhobho. Ngesi sixhobo singafaka iipakeji ezivela kwiPyPI, ulawulo lwenguqulo, iiprojekthi zasekhaya kunye nokusasazwa kweefayile.
ukuba jonga uluhlu lwayo yonke imiyalelo ekhoyo kunye neenketho Kufuneka ubhale:
Sinako fumana ulwazi ngakumbi malunga nomyalelo othile usebenzisa umthetho Umbhobho- uncedo. Umzekelo, ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nomyalelo wokufaka, chwetheza nje:
Faka iipakeji ngePip
Masithi sinomdla wokufaka iphakheji ebizwa ngokuba isandi, esetyenziselwa ukukhupha idatha kwiiwebhusayithi. Kuba faka ingxelo yokugqibela yempahlaKuya kufuneka usebenze lo myalelo:
ukuba faka ingxelo ethile yephakheji, kufuneka nje sidibanise == kunye nenombolo yenguqulo emva kwegama lephakheji:
Singayitshintsha i-pip3 nge-pip2 ukuba sisebenzisa iPython 2.
ukuba hlaziya iphakheji esele ifakiwe kuhlobo lwamva njeUmyalelo oza kusetyenziswa uya kuba yinto elandelayo:
Faka iiphakheji usebenzisa iimfuno zefayile
Ukuba sinefayile yokubhaliweyo enoluhlu lweephakeji zeepip kunye neenguqulelo zazo eziyimfuneko ukwenza iprojekthi ethile yePython. Siya kuba nakho ukusebenzisa lo myalelo ulandelayo kwi faka uluhlu lweemfuno ezichazwe kwifayile:
Uluhlu olufakelwe iipakeji
ukuba Dwelisa zonke iipakeji zombhobho ezifakiweKuya kufuneka ufake lo myalelo ulandelayo:
ukuba khipha iphakheji, kufuneka usebenze into enje:
Ngolwazi oluthe kratya, abasebenzisi banako ndwendwela iphepha le Isikhokelo somsebenzisi okanye inqaku malunga nalo eyabhalwa kwithuba elidlulileyo kule bhlog.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Umbhobho, ufakelo kunye nesiseko sesi sixhobo ku-Ubuntu 20.04
UDaniel Miranda Rojas sitsho
Ulwazi olugqwesileyo, ndifuna ngaphezulu malunga ne-python.
Phendula ku daniel miranda rojas
IFirefox iya kuba nomphathi wenkqubo kwaye sele inomhla wokuvalelisa kwiFlash
I-Kdenlive 20.04.1 ngoku ikhona ukulungisa ii-bugs ezingama-36 kunye nokuphucula inguqulelo yeWindows kunye neAppImage